बजार - घट्दैछ पुस्तकको आयात : मुलुक ढुङ्गेयुगतर्फ जाने संकेत
घट्दैछ पुस्तकको आयात : मुलुक ढुङ्गेयुगतर्फ जाने संकेत
काठमाडौं । कुनैपनि वस्तु वा सेवाका सबै आयातहरु मुलुकका लागि हानिकारक हुँदैनन् । त्यो आयातमा पुस्तकको आयात पनि पर्दछ । जसका घरमा सुलक्षणको बास हुन्छ, त्यो घरमा मानिसहरु विदेशबाट आउँदा कुनै न कुनै पुस्तक बोकेर आउँछन् । कुनै मुलुकमा पुस्तकको आयात बढ्यो भने त्यो मुलुक प्रगतिपथमा लम्कन लागेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । विश्वका राम्रा राम्रा विश्वविद्यालयका अनुभवी प्राध्यापकहरुबाट लिखित पुस्तकहरु पढ्नुको साटो गेसपेपर र गाईड पढेर परीक्षा उतीर्ण हुने संस्कार भएको मुलुकमा किताबको आयात घट्दो क्रममा रहनु कुनै आश्चर्यको विषय पनि होइन ।	थप पढ्नुहोस्
कालीमाटी र बल्खुका तरकारी व्यापारीमाथि बिहानै किन भयाे निगरानी ?
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मूल्य अस्वभाविकरूपमा वृद्धि भएपछि कालीमाटी र बल्खुस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारको अनुगमन गरेको छ । तरकारी तथा फलफुलकाे मुल्य अकाशिएपिछ सरकारी अनुगमनटाेलीकाे नजर बल्खु र कालिमाटीका थाेक व्यापारीमाथि परेकाे छ । जनस्तरबाट नै बजारमा अस्वभाविक मुल्य वृद्धि भएको गुनासो बढेपछिमात्रै सरकारले यस्ताे कदम चालेकाे हाे । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृतको नेतृत्वमा आज बिहानै ४ बजेदेखि उक्त तरकारी बजारको अनुगमन गरिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा साताको आज पहिलो दिन शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०.९५ बिन्दुले बढेर एक हजार २४९.४९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापक सेन्सेटिभ परिसूच्क ०.२४ बिन्दुले बढेर २६८.५७ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से सामान्य अङ्कले बढे पनि कारोवार रकम भने औसत मात्रै रह्यो । कूल १६१ कम्पनीको १० लाख ४२ हजार ६४६ कित्ता शेयर रु २८ करोड ५२ लाख १४ हजार ५७२ मूल्यमा खरीदबिक्री भए ।	थप पढ्नुहोस्
महानगरकै मूल्यांकनमा काठमाडौंभित्रका महँगा जग्गा, आनाको ५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाहरु
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक विधेयक २०७६ ल्याउँदै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जग्गाको नयाँ मूल्यांकन तोकेको छ। नयाँ मुल्य अनुसार मूल सडक आसपासको जग्गाको मूल्यांकन प्रति आना ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ।महानगरभित्र बाटो नभएका स्थानको न्यूनतम मूल्य चार लाख रुपैयाँ छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं। सरकारले अघि सारेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ। समितिको आजको बैठकमा सो वधेयक पेश भएको हो। सरकारले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। के छ त विधेयकभित्र रु विज्ञापन गर्न सकिने, होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय रहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
बजारमा जताततै बिषादीयुक्त भारतीय आँप, नखान डाक्टरको आग्रह
वीरगन्ज । विषादी प्रयोग गरेर पकाइएका भारतीय आँप नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको भन्दै उपयोग नगर्न आग्रह गरिएको छ । नेपालमा लगाइएको आँप जेठको तेस्रो सातापछि मात्रै पाक्ने भएपनि कर्वाइट नामक विषादी हालेर पकाइएका भारतीय आँप वीरगन्जको बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेको हो । वीरगन्ज तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विदुर गुप्ताले भारतबाट आएका दशहरी, सबुजालगायतका जातका आँप विषादीयुक्त रहेको बताएका छन् । भारतको गोवा, मद्रास, केरला, आन्ध्र प्रदेशबाट आयात गरिएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौंमा आजदेखि स्मार्ट पार्किङ शुरु
काठमाडौं । सवारी साधन पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्मार्ट पार्किङ वैशाखको सुरुवातसँगै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो यद्यपी विभिन्न प्राविधिक कारणले समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सवारी साधनको अत्याधिक चापका कारण ट्राफिक जाम हुनुका साथै शहर अस्तव्यस्त भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरले स्मार्ट पार्किङ योजना अघि सारेको थियो । सो योजना आजबाट कार्यन्वयनतिर लागेको छ । काठमाडौंको नयाँ रोड आसपासका ५ स्थानमा स्मार्ट पार्किङ शुरु भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
आकासियो तरकारीको भाउ, सबैभन्दा महङ्गो गोलभेडा [मुल्य सुचिसहित]
काठमाडौं । के तपाईलाई थाहा छ ? बजारमा यतिबेला तरकारीको भाउ आकासिएको छ । जेठ महिना सुरु भएसँगै बजारमा तरकारीको भाउ अत्याधिक बढेको हो । महँगीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव गोलभेडामा परेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै बढ्ने तरकारीको भाउ यस वर्ष जेठको पहिलो सातोदेखि नै बढेको हो । झापाको बिर्तामोडमा रहेको प्रदेश –१ कै ठूलो कृषिथोक बजारमा गोलभेडा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ 'खुद्रा' बिक्री हुँदै आएको छ । गतवर्ष गोलभेडाले बिक्री नभएपछि कृषकले राजमार्गमा फ्याँकेका थिए । गतवर्ष बिक्री नभएपछि किसानले गोलभेडा खेती घटाएको बताइएको छ तर अहिले भने भाउ आकासिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तरकारी बजार व्यवस्थित गर्ने बताए पनि बिचौलियाको बिगबिगी हटेको छैन । सरकारले करिब ९ महिनाअघि र आइतबार राति गरेको बजार अनुगमनमा समस्या उस्तै पाइएको हो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी अझै पाँच तह पार गरेर मात्र उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको अनुगमनले देखाएको छ । हरेक तहमा मूल्य बढ्दा तरकारी महँगो हुने गरेको छ । केही महिनाअघि तराई क्षेत्रमा भएको हावाहुरी र भारतको निर्वाचनलाई देखाउँदै यतिबेला व्यवसायीले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढाएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्